ကို တိုးလေး: အောင်မြင်သူဖြစ်ပါစေ။
ယုံကြည်မှုနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝအနာဂတ်က လှပလာမှာပါ။
Posted in Poems Posted by ကိုတိုး on 19 December 2009 at 6:36 PM
စိတ်ထဲရှိတာစပ်မိရင်းနဲ့အဲ့လိုလေးတွေထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ တော်ကြာနေကိုတိုးလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အခုမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဆဲပါပဲဗျာ။ သူများတကာအားကိုးလောက်တဲ့အရည်အချင်းလည်းမရှိပါဘူးဦးနှောက်ကထွက်လာတာကို ကဗျာတစ်ပိုဒ်အဖြစ်နဲ့စပ်မိပြီးရေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ ညီအကိုမောင်နှစ်မများအားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေကျပါစေခင်ဗျာ။
ဒီတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတာ ဦးကောင်းသန့်ရဲ့ သမီးလေးဖတ်ဖို့ ဖတ်ရသလိုပဲ....
ဒါနဲ့ “မောင်နှမ” နဲ့ “အဆင်ပြေကြ” သိလား..
ဟိတ် ... မောင်လေး
ဘယ်သူ့ကို စောင်းရေးထားတာလဲ.... ဟဲ ဟဲ.....။
ကောင်းသော ကဗျာလေး ပါကွယ်။
Let's speak Thai (2)
တာရာမင်းဝေ (ကဗျာများ) (1)
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ ကိုတိုးပါ ကျွန်တော်လည်း လူငယ်တစ်ယောက်ပါ ပျော်ပျော်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့ကိုလေ ကလိပါများလို့ ခဏခဏပြန်ပြန်ပြင်ရတယ်။ အားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကို လာလည်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။
My gambling inareal casino is always successful. Online sources for us online gambling
are very effective sources to start with. Casinos are for gambling, not all gambling is inacasino. hit counter
ဘလော့ဂါ ကိုကိုချောများ ကိုစေတနာ ကိုဝင်းဇော် ကိုသက်ထွန်းညိမ်း ကိုသားဖြိုး ကိုနေမင်းသံစဉ် ကိုအရုပ်လေး ကိုအိမ် ကိုညီနေမင်း ဖြိုးဝေတိုး ပြာသို(မောင်မျိုး) ကိုလွမ်းသူ ကိုလွမ်းဝေ ကိုမင်းကျန်စစ် ကိုတောင်ငူသား ကိုမော်စီ ကိုမီးပြတိုက် ကိုရဲရင့်နီ ကိုဟန်လင်းထွန်း ကိုကြီး ကိုရင်ညိမ်း ကိုတီး ဆုံစည်းရာ ကိုမိုးသောက် (ရှမ်းလေး)
ဘလော့ဂါမမချောများ ပါးလုံးလေး မမေလေး ကျောပိုးအိတ် နေ့အိမ်မက် မဖူးဖူး အဖြူရောင် (ဝှိုက်) မကောင်းကင်ပြာ မေတ္တာရောင်ပြန် မက်မက် အစ်မဝါ အစ်မသက်ဇင် အစ်မခင်ဦးမေ အစ်မနှင်းဇော် (ကဗျာမလေး) မ ကဗျာဦး အစ်မရွှေပြည်သူ အစ်မ နှင်းဆီနက် အောင်မြေ အစ်မကြယ်ပြာ အစ်မသက်တန့် အစ်မခေါင်ခေါင် ဝေလေး mydiary မမီးလေးဇာ ဧရာဝတီ မပန်းခရေ ဆုံမှတ် ညခင်းနဲ့လမင်း မမေမိုး ဖူးပွင့်အောင် မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းသူ ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (နန်း) ဟေမာန်
နည်းပညာဘလော့များ ကိုစေတနာ ကိုမိုးထက်မြင့် ကိုမနောသား ကိုသံလုံငယ် ကိုညီနေမင်း ကိုဇော်
စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ရအောင် - *စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ရအောင်* ငယ်ငယ်တုန်းက ခေါင်းချရင် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ မနက်မိုးလင်းတောင် မနည်း ထယူခဲ့ရတယ်။ အသက်ကြီး လာတာနဲ့အမျှ အကြောင...
အစကတည်းက ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးသားပါ - အစကတည်းက..... ........................... အရွယ်လွန် နှလုံးသားရဲ့ နုပျိုဆဲ အချစ်တွေဟာ စည်းတစ်ခုရဲ့ တစ်ဘက်ခြားမှာ မင်းရဲ့ ..... တစ်ရေးနိုးချစ်ခြင်းတွေကို တိတ်တ...
ပါရမီမြောက်သော သည်းခံခြင်း - ဤလောက၌ အဓမ္မ မထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လူတိုင်း၌ တာဝန်ရှိသည်။ မြင့်မြတ်သူများ အနေနှင့် ပို၍ တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုတာဝန်အရ အဓမ္မကို ချုပ်ငြိမ်းအောင် ...
Copyright © 2009 ကို တိုးလေး | |